Sheekada filimka Aiyaary: Sidharth iyo Manoj waxay la imaadeen fariin heerkii laga filaayay aan gaarsiisneyn – Filimside.net
Director Neeraj Pandey oo looga bartay filimada qayaanada iyo sirdoonka xeelada badan markaan Aiyaary juhdi badan ma galinin madaama fariintiisa gaabis badan ka muuqato.
Jilaayaasha filimkaan: Manoj Bajpayee, Rakul Preet Singh, Anupam Kher, Sidharth Malhotra, Naseeruddin Shah
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 40-daqiiqo
Qiimeynta fariinta filimkaan: 2.5/5 (labo xidig iyo bar ma ahan fariin adag)
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Aiyaary: Bandhiga Manoj Bajpayee, dadaal Sidharth Malhotra iyo fariintiisa oo xoogaa qaybaha dambe xiiso leh.
Muxuu Ku Liitaa Aiyaary: Fariintiisa ma ahan mid adag sidoo kalena 2-saac iyo 40-daqiiqo waa waqti aad u badan madaama fariinta tahay qayaano iyo sirdoonka ciidanka waxaa la rabay inuu waqti ahaan filimkaan koobnaado.
Fariinta Filimka Aiyaary Oo Kooban: Korneel Abhay Singh (Manoj Bajpayee) iyo Major Jai Bakshi (Sidharth Malhotra) waa labo ciidamada Hindiya ku tiirsan yihiin aragti ahaana ka mideesan la dagaalanka musuq maasuqa.
Laakiin Major Jai Bakshi (Sidharth Malhotra) ayaa gadood sameenayo kadib markii uu ogaado xogaha qarsoon ee sirdoonka Hindiya oo ceebo badan ka jiraan.
Wax kale ma ahan wuxuu ogaanaa Major Jai Bakshi (Sidharth Malhotra) in musuq maasuq baahsan ka jiro xafiiska wasiirka difaaca Hindiya.
Kadib Korneel Abhay Singh (Manoj Bajpayee) ayaa loo xil saaraa inuu gacanta kusoo dhigo Major Jai Bakshi (Sidharth Malhotra) oo u baxsanaayo London.
Korneel Abhay Singh (Manoj Bajpayee) aragti ahaan wuu qabaa in wax laga badalo nidaamka sirdoonka Hindiya iyo ciidamada u shaqeeyaan balse ma doonayo sida wiilka dhalinta yar Major Jai Bakshi (Sidharth Malhotra) in wax walbo xoog lagu xaliyo.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Aiyaary: Director Neeraj Pandey markaan tijaabada wuu ku dhacay madaama filimkaan dayacaad badan ka muuqato waxaa la rabay in 2-saac iyo 10-daqiiqo kusoo koobo fariintiisa laakii 2-saac iyo 40-daqiiqo ayuu soconaa Aiyaary sidoo kalena mashruucan fariintiisa siweyn kuuma soo jiidaneyso.
Kan ma ahan Neeraj Pandey sameeyay filimada aan indhaha laga qaadi karin A Wednesday, Special 26 iyo Baby madaama Aiyaary deg deg badan ka muuqato iyo habacsanaan weyn.
Bandhiga Jilaayaasha: Inaba caadi ma ahan bandhiga uu la yimid ruug cadaa Manoj Bajpayee isaga ayaana udub dhexaad u ah filimka Aiyaary iskuna dayay inuu garbihiisa ku qaado laakiin fariinta oo dayacaad ka muuqato dadaalkiisa kuma bad baadin karo.
Sidharth Malhotra dadaal wacan ayuu sameeyay wuuna ka bandhig ka fiican yahay dhawaan filimadiisii ugu dambeeyay A Gentleman, Baar Baar Dekho iyo Ittefaq.
Atirishada Rakul Preet Singh booskeeda soo jiidasho ma leh waxaana la moodaa in si dirqi ah loogu soo daray filimkaan.
Dhamaan jilaayasha kale ee doorka caawiyaha mataleen filimkaan Vikram Gokhale, Kumud Mishra, Aadil Hussain iyo Naseruddin Shan bandhigooda wuu wacan yahay.
Gunaanad: Filimka Aiyaary waa mashruuc magaciisa ka been sheegay madaama fariintiisa qayaano ahayn mid adag sidoo kalena waqti ahaan aad ayuu u dheer yahay taasi oo xiisaha ka dileyso, waana hubaal in dhanka Boxoffice-ka ku fashilmi doono dhaliilaha uu leeyahay awgeed filimkaan.
Fadlan hoos kaga bogo goos gooska filimka Aiyaary:
Waxaa Aqrisay 742